( သမီးလေးရဲ့ Valentine ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( သမီးလေးရဲ့ Valentine )	21
( သမီးလေးရဲ့ Valentine )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Feb 18, 2015 in Creative Writing, Poetry | 21 comments
ဘဝတွေများစွာကြား ကံတရားက အလှည့်ပေး
ဒီလိုနဲ့ အနှစ် ၂၀
သမီးမှာ ချစ်သူရှိနေတာ အဖေသိ
ရက်လကြာရှည် ပြောကြလေတဲ့ Valentine
အို . . . . သမီးရယ်
ခံနိူင်ရည်တွေ ပြည့်စေကွယ် ။
အလင်းဆက် says: မနက်ခင်း ပွင့်တဲ့ ပန်းကလေးထက်ကို ပိုလှတာ
ချစ်သမီးလေးရဲ့ အပြုံးနုနုလေးတွေဟာ. . .
ဦးထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းလေး သတိရသွားလို့
တောင်ပေါ်သား says: နာမယ်နော်
နာ့သာမီးက ဖွေးဖွေးဟုတ်ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12162
အလင်းဆက် says: ခပ်ဆင်ဆင်လေးများ…တူနေသလားလို့… ပါ အိုးမြူးရယ်…
Ma Ma says: ဗယ်လင်တိုင်းဒေး မဆင်နွှဲလိုက်ရတဲ့သမီးလေးက
သူ့ကိုယ်သူ အားနည်းသေးသိမ်စိတ်တွေ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
အဖေဆိုတာ သမီးအတွက် ဘ၀မှာ သူရဲကောင်းပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကြိုးစားနေဆဲပါ မမရေ
ခင်ခ says: နောက်နှစ်တွေရဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေး ရောက်ရင်
သမီးတွေ သားတွေခေါ်ပြီး မိသားစုညစာ ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားစားတဲ့ အလေ့အကျင့်လေး လုပ်လိုက်ဗျာ။ ဒါဆို ဗယ်လင်တိုင်းဒေးဆို မိသားစုစုံညစာစားပွဲကိုဘဲ မျှော်ကြ စားကြလိမ့်မယ်ထင်။
တောင်ပေါ်သား says: ကောင်းပါပြီ ကိုခ ရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .Very good poem. ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုလက်ကနဲ မြင်လိုက်ရပါတယ်
တောင်ပေါ်သား says: ဒီခေတ်က မလွယ်ဘူး ကိုမိုက်ရေ
အဖေက အမေမရှိတဲ့ သမီးတွေကို အတော်စဉ်းစားပြီး ထိန်းရတာ ၊
လျှော့တန်လျှော့ ချော့တန်ချော့ ခြောက်တန်ခြောက်ပေါ့လေ ၊
veryloveman says: ရသမျိုးစုံခံစားလိုက်ရပါတယ်
တောင်ပေါ်သား says: ကျေးကျေးဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
Ma Ei says: ကိုရီးယားကားတွေထဲ ပြောနေကျ စကားလေး ကလေးကိုပြောပေးပါ…
…လောကကြီးတစ်ခုလုံး ဘာတွေဘဲဖြစ်နေနေ..မနက်ကျရင် နေထွက်လာမှာပါတဲ့…
ခုချိန်မှာ ခံစားနေရပေမယ့် နောက်လေးငါးရက်ဆို သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်
အချိန်က ကုစားပါလိမ့်မယ်…ခုချိန်မှာ မိသားစုက နွေးထွေးအားပေးပါနော်
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ကဲ့ အမအိရေ
မြစပဲရိုး says: ဒီလို အားပေးတတ်တဲ့ နားလည်မှုရှိတဲ့ အဖေ ကို ရထား တာ သမီးလေး တွေ ကံကောင်းလိုက်တာ ကိုမျိုး ရေ။
သမီးလေးအသက် ၂၀ ဆိုတာ ငယ်ပါသေးတယ်။
ဘဝ ကို ပိုပြီး တိုးတက်အောင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြီး တင့်တယ် အောင် သာ အာရုံစိုက်ဖို့ သမီးလေး ကို ပြောလိုက်ပါ ကိုမျိုးရယ်။
တစ်နေ့ကျရင် တူရာလူ ထပ် တွေ့မှာပါ။
ဘာမှ ဝမ်းနည်းနေဖို့ မလိုပါဘူးလို့။
တောင်ပေါ်သား says: အရီးရေ
သူတို့ကို ထိန်းနေရတာမို့ မိုက်ချင်နေတာတွေတောင် မိုက်ချိန်ကို မရပါဘူးဗျာ ၊
တစ်နေ့ သူတို့ သိလာမှာပါ ၊
ကိုယ့်တုန်းကလည်း ရည်းစားဦးနဲ့ကွဲတာ ကမ္ဘာပျက်ပြီ ထင်မိတာ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ဒီလို ပါးပါးမျိုးရထားတဲ့ သာမီးဒွေ ကံကောင်းဒါ…
ကိုရင်စည်သူ says: အဲ့လာဒွေ ခံစားရမှာဆိုးလို့.. မိန်းမယူပီး ကလေးမမွေးဘူးဆုံးဖြတ်ထားတာ..
ကလေးရှိတော့ မိန်းမက ကိုယ့်သိပ်အာရုံမစိုက်တော့ မြေအောက်တော်လှန်ရေး
ပြန်စလို့ရပီဆိုတော့.. နှစ်မျိုးနှစ်ခွ နှစ်ဂွင်ချက်ဖြစ်နေရပါတယ်ဂျာ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အားလည်းပေးပြီး
ရုတ်တရတ် သမီးလေးရဲ့ Valentine ဆိုပြီူး အောက်က
င်္Foods Woman must never eat ဆိုတဲ့ပုံကြီးပေါ်လာတော့
ခင်ဇော် says: ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အားကိုးရာ ဖေဖေ
ဦးကြောင်ကြီး says: တားတားကြောင်ကြီး ဓဂေါင်ရုံး ရှိပါရယ် ပါပါမျိုး..။ ယုန်ဒရယ်မှား…
တောင်ပေါ်သား says: ကြောင့်ကိုတော့ ကြောက်တယ်ကွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.